Pel nke Switzerland | Ọrụ - Nlekọta - Njem njem gaa 5 * okomoko Bvlgari Resort
Onye ndu njem na Buddha-Friendly Friend
Cristina - Àkwá nke Switzerland
Ibe nke Switzerland - Na Bvlgari Resort Dubai, ozi na-atọ ụtọ na awa 24 dị ịtụnanya na Pearls nke Switzerland njegharị, njem na ndị ọzọ…
Onyinye Switzerland na Dubai
Laghachi na Switzerland si Ahịa Njem Arab (ATM) ihe omume na Dubai ebe m zutere ochie na ndị enyi ọhụrụ na ndị mmekọ azụmahịa.
Ekele pụrụ iche nye Rasha Oudeh, onye isi CEDEM AG Switzerland. O nyegoro ndi nkwuputa igwe okwu nke ndi nwanyi ndi ATM, na ndi nwere onyinye. Alessandra Alonso nke ndi Inyom na Njem akpọwo Sarah Gasim si NEOM òkù Saudi Arabia, Emma Banks osote onye isi ala, F&B Strategy & Development Europe, Middle East na Africa sitere na Hilton na Andrea Bailey sitere na ndị ndụmọdụ njem njem iji kwuo okwu na kọmitii lekwasịrị anya Ohere ndi nwanyi nwere njem na njem nleta na obodo GCC, na nnọkọ ATM2019.
N’ọnwa Septemba, anyị ga-anabata ụfọdụ ndị njem si Kuwait na Switzerland. Anyị na-achọ ndị nkwado chọrọ ịme ngosi n'etiti izu nkwado na Switzerland. Biko kpọtụrụ anyị ma let's atụmatụ anyị etu anyị ga-esi kwado ọnụ.
N'oge m nọrọ na Dubai, m nyochara 5 * okomoko Bvlgari Resort. Nke a ebe adịghị n’ụlọ! N’ebe Bvlgari Resort Dubai, inwere ike ime ememe La vita e dolce ma nwee obi uto. Cheta na Dubai bu otu n’ime ebe nleta ndi njem zuru ụwa ọnụ ma ọrụ juputara na ya. N'ebe a, ị nwere ike zuru ike ma na-ezumike.
Duru rue Cristina akwukwo
Oge 24 na pearl nke Switzerland nlegharị anya, njem na ndị ọzọ
Echiche site na Bvlgari Resort & Residences Dubai
Pearls nke Switzerland - Dubai bụ obodo kachasị ukwuu na United Arab Emirates (UAE) ya na otutu nde mmadu bi na 9. Obodo Abu Dhabi bu isi obodo nke UAE. Agara m mba ahụ na nke mbụ na 1998. Obodo enweela ike mgbe niile ma gbanwee ọtụtụ. Kemgbe gburugburu 1833, Dubai abụrụla ọdụ ụgbọ mmiri. Taa aku na uba dabere na ahia, njem, ugbo elu, ala na ụlọ ọrụ ego na-abawanye.
Afọ nke ndidi - HH Sheikh Khalifa bin Zayed kwuru 2019 dị ka Afọ nke Ntachi Obi. The mara ọkwa chọrọ ime ka UAE dị ka isi obodo zuru ụwa ọnụ maka ndidi na ụzọ ya, kemgbe e guzobere ya, ibu uzo nkparịta ụka n'etiti ndi mmadu nke ọdịbendị dị iche iche na gburugburu ebe nkwanye ugwu nke jụrụ oke egwu ma mesie ike na nnabata nke ọzọ.
Gụọ Ebe a banyere akụkọ banyere Dubai.
Dubai Al Maktoum Airportgbọ elu mba Dubai World Central (DWC) minit 45 site na ụgbọ ala (dabere na okporo ụzọ) Dubai International Airport Dubai International (DXB) minit 25 site na ala (dabere na okporo ụzọ)
Chọpụta Ebe a ma ọ bụrụ na ịchọrọ visa ịbanye UAE.
Mee 2019 © Copyright Pearls nke Switzerland. Ederede na foto nke Cristina Tschuppert dere.
Ndị ọrụ na-amụmụ ọnụ ọchị nọ n'ọnụ ụzọ Bvlgari Resort & Residences Dubai nabatara m nke ọma mgbe m bịarutere n'isi ụtụtụ. Ọ bụ ebe kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ ma nụ ụtọ ezigbo ndụ ahụ. Ogige Bvlgari Resort & Resination Dubai nọ na mpaghara agwaetiti nwere oghere 300 nke dị n'ụsọ oké osimiri Dubai. N'ebe a, ọ ga-adị gị ka ị gaa na obere agwaetiti Italian. Perfectwa zuru oke iji zuru ike ma nwee obi iru ala na nhọrọ ị ga-anọ n’etiti obodo oge ọbụla ịchọrọ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ọdọ mmiri mmiri mmiri na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ na ogige a Ebe ị ga-aga mgbe ị na-aga Dubai.
Mụ na Oriaku Laura Antony na-eri nri ụtụtụ (anyị na-enyekwa ndị nlekọta ahịa nlekọta njem) Freshly Squeezed Ihe ọṅụṅụ oroma, Jasmine Green Tea, Benedict Eggs na Smoked Salmon | Buffalo Burrata na udara Tomato, Taggiasche Olives, Pesto | Pancakes, Anụ ọhịa, Banana na Organic Maple Suga | Bircher Muesli na Anụ ọhịa.
N'ịbụ ndị na-anọ n'èzí na mbara ala sara mbara anyị na-anụ ụtọ ụda nke nnụnụ na-abụ abụ na echiche anyị banyere Ụlọ ahịa bvlgari Ụlọ. A na-esi nri ahụ wee sie ya ọhụrụ. Egosiputara ihe nile zuru oke ma jiri ịhụnanya kwado ya.
N'ebe a ị nwere ike ịtụ anya ọrụ mbụ na ọrụ onwe gị.
Lelee ndị Dubai Dubai video
Ihe ndị ọzọ nke ihe onwunwe:
25 min. si Dubai International Airport DXB.
6 Km si Burj Khalifa na Dubai Nnukwu alllọ Ahịa.
Enwetara 5 Km si Shaikh Zayed Road.
Uzo mmiri nke 600m maka ndi obia.
Ezinaụlọ-enyi: Otu klọb dị obere maka umuaka.
Ndị ọrụ asụsụ Arabik, Bekee, Italiantali, French, Hindi, Japanese na asụsụ Mandarin.
6 F&B na-apụta gụnyere tlọ oriri na ọ signatureụ signatureụ Hōseki Japanese nwetara onyinye.
Egwuregwu mmiri na ihe omume ọdịda anyanwụ.
Nweta ohere dị mfe na ọnọdụ Golf dị nso.
The Resort na-enye ime ụlọ na obere ime ụlọ 101, tinyere Superior Rooms, Deluxe Beach View Rooms, Premium Ocean View Ụlọ (ha niile bụ ime ụlọ bụ 55 m2), Junior Suites (80 m2), Dieluxe Suites (105 m2) na Bvlgari Suites (120 m2).
20 Bvlgari Hotel Pool Villas, tinyere otu ime ụlọ osimiri ime ụlọ Villas (175 m2), ụlọ nlele anya abụọ nke ime ụlọ (250 m2), ime ụlọ elu igwe nwere ọnụ ụlọ abụọ (250 m2), ụlọ elu na-elepụ anya ụlọ ime ụlọ (315 m2) na The Bvlgari Villa (540 m2). Ulo abuo ndi Bvlgari 20 di ụlọ na-apụ n'ụlọ ihe niile a na-enye nke kachasị mma n'ikike ngwá ahịa Italian.
Hotel Poll Villa ụlọ ime ụlọ abụọ na-elele osimiri
Ebe izu nri
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke Hōseki
The Bvlgari Yacht Club Dubai Restaurant
A mara Bvlgari chọkọleti dị ka ihe “chiiz chọkọlorike” nke onye ahịa Rome. Ọ bụ ahụmịhe nke mmụta na ndị kasị dị ọnụ ala eze ga-amata ozugbo ma nwee ekele dịka Bvlgari dị ọcha. N'ihi na ndị chocolate ndị hụrụ nrọ! Lelee video
Spa & Mma
The Bvlgari Spa na-enye ọgwụgwọ na ihu ahụike, ngwaahịa na ọrụ. Oge mmeghe maka ọgwụgwọ: 9 am - 10 pm
Ihe owuwu nke spa: 7 am - 11 pm
Ngosiputa mma ngwaahịa site na Bvlgari na La Mer enwere ike ịzụta n'ọnụ ụzọ nke nnabata mara mma yana ụfọdụ akwa mmiri.
Ahịa ọla edo kacha mma nke Bvlgari
Discover Fiorever - Fiorever bụ ụtụ maka ịhụ n'anya, ahuhu na obi uto nke ndu. Maazi Mohammad Malik Mebar bụ Onye na-ahụ maka ahịa ahịa nke Bvlgari Resort & Bi na Dubai. Kpoo ya ma choo i zuta Fiorever.
The ụlọ ahịa Bvlgari
N'ebe a, ị nwere ike ịzụta ngwaahịa Bvlgari dị ka onyinye pụrụ iche ma ọ bụ naanị ihe maka onwe gị: akwụkwọ, ihe nsure ọkụ, kandụl, uwe, ngwa na ndị ọzọ. Obere ngwongwo na ngwaahịa dị ukwuu.
Bvlgari na Nchekwa Ụmụaka
Iji kaa akara afọ-iri-anọ n’etiti Bvlgari ma chekwaa Childrenmụaka ahụ, Bvlgari Majlis na-anabata ihe ngosi pụrụ iche na-egosipụta afọ 10 nke njem ha na Save the Children na Bvlgari iji kwado agụmakwụkwọ ụmụaka.
Ngwa ahia Bvlgari Iyebiye La Mer Spa & Mma Sozụ ihe ncheta.
Imeghe n'oge na-adịghị anya!
New bvlgari Hotels na-ndokwa imeghe na:
Osimiri ndị a: Maserati, Mercedes, BMW na Chevrolet
Ịhụ na Deira, Dubai
Deira bụ mpaghara n'obodo Dubai nke Gulf Persian, Sharjah na Dubai Creek.
Kemgbe ụwa, Deira abụwo ebe azụmahịa nke Dubai. mana a tụfuola mkpa ya n’ime afọ ole na ole gara aga n’ihi mmepe na-adịbeghị anya n’okporo ụzọ Sheikh Zayed na mpaghara ndị ọzọ gbadawara n’akụkụ ụsọ oké osimiri gaa Abu Dhabi.
Port Saeed bụ ọdụ ụgbọ mmiri n'akụkụ Deira nke Dubai Creek. Port Saeed na-ejide ụfọdụ n'ụgbọ mmiri na obere ụgbọ mmiri na Dubai.
A ga-eleta ya mgbe ọ bụla na Dubai. Ruo ọtụtụ narị afọ, ngwongwo na-eme njem si India, Africa na Asia tinyere A na-azụ okporo ụzọ Silk na mpaghara ndị a dị egwu.
A ga-eleta bụ Gold Souq. Ọ bụ Dubai kachasị ama ama na eleta souq na-enye nnukwu nhọrọ nke ụdị ọla niile. Iberibe ịchọ mma na-esite na mgba na-esighị ike ruo na ngwa agha zuru oke, ngwa ọrụ na-eme ka souk dị mma maka ndị na-aga ịlụ ọhụrụ na-achọ ọkaibe nke ukwuu. kwalite ụbọchị pụrụ iche ha.
Ngwá mgbanaka ọlaedo kasị elu n'ụwa bụ Najmat Taiba (Star of Taiba) nke Taiba mere maka Gold na Jewelery Co., Ltd nke Saudi Arabia. A na-etinye mgbanaka na kilogram 5.17 nke nkume dị oké ọnụ ahịa si Ihe ịrịba ama Middle East wee seto mgbanaka ọla edo 58.686 21 carat, nke Council Gold World kwadoro. UAE ya na kilogram 63.856. EE, EE, Gold bụ itinye ego mgbe niile na amamihe! Nkà nke ichekwa akụnụba: gold
The Spice Souq dị n'akụkụ nke Gold Souq. Ihe ịzụta? Cinnamon, cardamom, cloves, saffron, tii na ọtụtụ ndị ọzọ ngwa nri na herbs.
Iri na Dubai
Anyị na-akwado ụlọ ọrụ Lebanọn Babel n'ihi na nri mmiri na mezze na La Mer site Meraas on
nke dị n'akụkụ osimiri n'akụkụ Jumeirah 1. Tinyere onye n'ime Dubai ha nwere alaka atọ n'ime Lebanon nakwa otu n'ime Kuwait. Ebe a na-edebe tlọ oriri na ọ Restauranụ overụ karịrị ọkwa abụọ ma ọ nwere mbara mbara. Nnukwu ambience, nri yummy na ndị ọrụ nwere nnabata. Ha nwere nnukwu mmiri nri mmiri yana ebe ime ụlọ. Anyị nọ ọdụ na mbara ihu ahụ ma nwee ụfọdụ nri mezze dị ka shrimps Beiruty na mpịakọta chiiz. Ejekwara anyị ozi mkpụrụ osisi na ihe ụtọ!
Nchekwa ndokwa: + 971 4 419 0220
Oge 24 na Dubai na pearl nke Switzerland njegharị, njem na ndị ọzọ
Biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ ụlọ nkwari akụ ozugbo na adreesị email ha: reservations@pearlsofswitzerland.com ma ọ bụrụ na-amasị gị akwụkwọ njem gaa Dubai.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ndị ọzọ ozi banyere ọrụ ụlọ ọrụ na Dubai. Lelee anya na post anyị na olileanya anyị ịhụ gị na United Arab Emirates.
Citylọ ọrụ Dubai City na-enyezi nduzi dị mma maka ibi na Dubai. Ndị otu anyị kpebiri ịgbakwunye ozi maka asụsụ ọ bụla maka anyị Ndị njem Dubai. Ya mere, na nke a n'uche, ị nwere ike inweta nduzi, ndụmọdụ na ọrụ na United Arab Emirates na asụsụ nke gị.